Hery :: Martsa 28th, 2013 12:09 pm
Indraindray mila avela kely koa izy fa tsy ampihantaina be e. Avela hikarakara tena, avela hi-debra kely. Matetika mantsy raha vao azony mora foana daholo ny zavatra rehetra dia tsy misy maminy aminy fa mitady zavatra sarotra azo izy.
Mahereza fa vao manomboka :-p
ikalamako :: Martsa 30th, 2013 8:05 pm
miala sakana neny oooo…. aza manahy fa rehefa tafaresaka ny samy reny manana zanaka tonga amin’io sala-taona io dia mitovy olana… hihihihi kôpy njy zay an, hatraty io hoy ny fitenenana.
Tsy hoe mihanta loatra zareo, fa toa tsaroako ihany koa fa tsy mba nahazo n’inon’inona aho tamin’ny taonany fa toa niala sakana nahakivy an’i mama ihany koa an…
Hery o, mahereza fa mbola handalo eo koa – hihihihihi